Formatsdị nke Kindu, olee ụdị Kindle na-agụ? Chọpụta! | Ndị niile na-agụ akwụkwọ
Joaquin Garcia | | Amazon unu si n'ihe unu, eBooks, ndị na-agụ akwụkwọ
E-akwụkwọ bụ faịlụ dijitalụ nke nwere akwụkwọ ma ọ bụ isiokwu mbipụta. A na-akpọkarị ya ebook, aha na-abịa site na okwu Bekee elektrọnik. Na mbu, enwere ike ighapu ngwaọrụ ndi nwere ike iguta akwukwo elektrọnik na okwu ebook ma oburu na anyi agbakwunye na nke a otutu otutu acronyms nke gbara gburugburu akwukwo ebook, ogba aghara di. Ugbu a, mmadụ ole na ole maara kpọmkwem cnke bụ formats dakọtara na Kindle, onye na-agụ akwụkwọ ntanetị e chere na ọ bụ kacha mma eReader.
Ọ bụghị ndị niile na-agụ akwụkwọ ntanetị nwere ike ịgụ otu ụdịNọmalị, onye ọ bụla na-emepụta nrụpụta na-agụnyekarị otu ma ọ bụ abụọ nke ụdị nke ha tinyere usoro izugbe ndị ọzọ anaghị akwụ ụgwọ. N'ime usoro nke abụọ a, Epub pụtara, nke bụ usoro ebook n'efu, txt, pdf ma ọ bụ akwụkwọ doc. Banyere ụdị nke mbụ, usoro nhazi nke nnukwu ndị na-emepụta gụnyere, ọ na-adaberekarị na ụlọ ọrụ ahụ, mana ha niile sitere na Epub usoro ha gbanwere. Ihe ọghọm nke ihe a niile bụ na ọ bụrụ na anyị azụta ebook site na ụlọ ahịa akwụkwọ, belụsọ ma anyị nwere usoro anaghị akwụ ụgwọ, anyị agaghị enwe ike ịgụ ya na onye na - agụ akwụkwọ site na ụlọ ahịa ọzọ.
Ndaghachi azụ ndị a na-apụtakarị ìhè n'ihe gbasara Amazon, onye ndị na - agụ ya, Ụdị ihe, naanị ha na-agụ ọnụọgụ ole nke ederede, nke, anọ formats nke Amazon. Formatsdị ndị a bụ usoro nke Kindu 7, usoro nke Kindu 8, usoro mobi na usoro prc. Formatsdị ndị a bụ mmelite dịka mobi ma ọ bụ Kindle Format 7 ma ọ bụ ha were ọkọlọtọ, usoro Epub dị ka ntọala maka ịmepụta usoro ndị a. Ezigbo ihe atụ nke ikpeazụ ga-abụ Kindle Format 8. Mana ka anyị lebakwuo anya na ụdị ndị a.
1 Thedị Kindle 7 ma ọ bụ nke a makwaara dị ka AZW
2 Dị Kindle 8 ma ọ bụ AZW3
3 Kindle Mobi usoro
5 Bookdị ebook ndị Kindle Fire nwere ike ịgụ
Thedị Kindle 7 ma ọ bụ nke a makwaara dị ka AZW
Kdị Kindle a bụ ụdị nke mobi ka emelitere. N’afọ 2008, Amazon zụtara ụlọ ọrụ Mobipocket yana ya niile ụlọ ọrụ ikikere na ngwaahịa. Nke a abụghị nke ukwuu mana ha nwere ihe Amazon nwere mmasị na ya, ihe ikikere maka usoro ebook, ọkachasị usoro mobi. Ihe usoro mobi na-agbali ịgbaso iwu OpenBook, usoro nke dabere na ọkọlọtọ xml weebụ. Mgbe nzụta ahụ, Amazon were usoro ahụ, na-asọpụrụ iwu niile na arụmọrụ ya, wee webata DRM nke ya, sọftụwia na-egbochi iji ebook na akaụntụ ụfọdụ ma ọ bụ ngwaọrụ ụfọdụ, maka azụmahịa nke ebook ahụ, otu a bụ A mụrụ Kindle Format 7 ma ọ bụ AZW.
Ka oge na-aga, Amazon eReaders malitere na ha na ngwanrọ na ụdị ha nwere ike igwu egwu, nke a bụ otu anyị nwere ike isi hụ Kindle Format 8.
Dị Kindle 8 ma ọ bụ AZW3
Ọ bụ mmalite nke Kindle Format 7, ọ nwekwaghị usoro mobi tinyere mgbakwunye na drm mana ọ bụ ihe ọzọ. Kdị Kindle 8 ma ọ bụ AZW3 bụ ebook nke na-agbaso ọkọlọtọ EPUB3, nke ha gụnyere drm ma tinyekwa ya na faịlụ na usoro AZW ma ọ bụ Kindle Format 7 nke mere na ọ nwere ndakọrịta na ngwaọrụ ndị gụrụ usoro ochie. Mgbe emepụtara usoro mobi na Kindle Format 7, ịhazi ọkọlọtọ epub ka bụ ihe nzuzo na obere ihe mgbagwoju anya, yabụ Amazon enweghị obi ike na usoro a ruo mgbe AZW3 rutere. AZW3 anaghị eji ike HTML5 eme ihe n'ụzọ zuru ezu dị ka ụfọdụ mkpado ọhụrụ anaghị akwado ha na ụfọdụ ndị na-adịghịzi aga n'ihu na-eji ha eme ihe. Tụkwasị na nke ahụ, a naghị akwado usoro CSS3 n'ụzọ zuru ezu, ụfọdụ ihe ndị dị ka ihe ndabere dị na ndabere adịghị akwado CSS3.
Kindle Mobi usoro
Tinyere usoro ndị a Kindle, Kindle eReaders na-akwado usoro mobi, ọ bụ ezie na ọ na-anọchite akụkụ kachasị ochie nke Amazon, usoro a na-aga n'ihu na Amazon na-aga n'ihu na-akwado ya na eReaders ya. N'ezie, ọ bụ naanị usoro nke enweghị DRM, dịka akọwapụtara na Amazon. Ma DRM-free Mobi nwere ọtụtụ n'ichebe nchebe ebe ọ bụ na ụlọ ọrụ Mobipocket kere ya na-anọchi anya usoro ebook nke abụọ ha mepụtara.
Want chọrọ ịmata ogologo oge ọ ga-ewe iji gụọ akwụkwọ? Weebụsaịtị a na-agwa gị
Nke mbụ n'ime ụdị ndị ahụ Amazon nwetara site na nzụta ụlọ ọrụ ahụ na nke ọ zigara ndị na-agụ ya bụ usoro prc. Prc bụ usoro dị mfe dị ka usoro mobi ma na enweghị nchekwa ya, nke mere na ugbu a ndị niile na-agụ usoro mobi nwere ike ịgụ usoro prc. Ọ dị obere ịhụ akwụkwọ ntanetị n'ụdị a, ma ọ dịkarịa ala ndị kachasị dị ugbu a, mana ebe ọ bụ na enweghị usoro ntụgharị nke akwụkwọ Kindle, ọ dị mkpa idobe usoro ochie a na ndị na - agụ ya, opekata mpe maka ịgụ akwụkwọ ochie.
Na mgbakwunye na usoro ya, Kindle kwadoro usoro ndị ọzọ nke ndị nwe ha abụghị Amazon ma ọ bụ nwee ikikere GPL. N'ime usoro ndị a, PDF pụtara, ụdị faịlụ na-abụghị n'onwe ya usoro ntanetị, mana ọ bụ ụdị faịlụ na-arụ ọrụ nke ọma maka ịgụ. Pdf bụ nke Adobe na aha njirimara ya, Akwụkwọ Mbugharị Portable, na-ezo aka na njirimara ya kachasị mma, enwere ike ibugharị ya. Ọ bụ ezie na Adobe bụ onye nrụpụta kachasị nke usoro a, na 2008 ọ tọhapụrụ ya wee bụrụ akụkụ nke International Organization for Standardization, nke ghọrọ usoro mmeghe. Nke a mere ka pdf usoro na obere ọrụ ya na-arụ ọrụ nke ọma na Amazon eReaders, agbanyeghị nha ihu igwe, na-erughi 9,7 ”, na-eme ka ọgụgụ isi siere ụfọdụ ndị ike. Na mbu, agbaliri idozi ya na okike nke Kindle buru ibu, Kindle DX a ma ama, mana eReader a gbahapụrụ ya n'oge na-adịghị anya ịchọ ụzọ ndị ọzọ dị ka ịgbanwe pdf akwụkwọ na Epub ma ọ bụ na-eme ka pdf dị ka nha nke ihuenyo.
Obiọma ahụ ọ nwere ike ịkwado usoro ochie, dịka txt ma ọ bụ Html. Nke mbụ n’ime ha, txt bụ usoro kachasị mfe dị na kọmputa kọmputa. Ọtụtụ n'ime anyị ejirila usoro a rụọ ọrụ, ọ bụ usoro nke Windows Notepad na-ewepụta, mana ugbu a na-agụ akwụkwọ dị ka akwụkwọ n'ụdị a bụ ọrụ siri ike ebe ọ bụ na usoro a anaghị amata nhọrọ nhazi isi ma ọ bụ nke ederede ederede.
Ndị na - agụ akwụkwọ ọkụ dị ọhụrụ ejirila ọgụgụ nke doc na docx formatsNdi Microsoft Okwu meputara usoro ndia ma buru ezigbo uzo ebook nke etinyere na txt. N'adịghị ka txt, akwụkwọ doc na docx na-enye anyị ohere ịnwe akwụkwọ edezi na preformatted maka ịgụ. Mana usoro abuo a abughi ebumnuche ka ha buru akwukwo, ya mere ojiji ha nwere otutu ihe nzuzu na onye obula. Otu n'ime nsogbu ndị ahụ dị na nha faịlụ. Ọ bụrụ na anyị elele nha nke akwụkwọ ọgụgụ ahụ na ụdị AZW na AZW3, nke a adịchaghị oke, ọ na-adịkarịkarị karịa megabytes abụọ, agbanyeghị, ebook dị na doc ma ọ bụ docx nwere ike ịnwe ihe ruru ugboro 3 karịa, na-esiri ya ike karị jikwaa ma jiri site na Kindle.
Ihe odide kọmputa electronic eReaders, ya bụ, Kindle, nwekwara ike mụta nwa onyonyo, ọ bụ ezie na ha adịghị na agba, ọ bụrụ na ị nwere ike ịghọta ọdịiche na mgbanwe nke asụsụ. Nke a na Ọdịdị kachasị ọhụrụ, nke nwere teknụzụ kọmputa elektrọnik kachasị ọhụrụ yana kwa mkpebi dị elu, nwere nnukwu ekele. Ọ bụrụ na ihe anyị chọrọ ịhụ bụ onyonyo dị na Kindle Fire, na mgbakwunye na nke dị n'elu anyị nwere ohere ịhụ ihe onyogho na agba. Formatsdị onyonyo dị ọtụtụ ma dịgasị iche iche, mana enweghị Ọdịdị nwere ike ịgụ ụdị niile. Ihe dị mma banyere nke a bụ na Amazon lebara anya ka ndị na-agụ ya nwee ike ịgụ ụdị ihe oyiyi kachasị ewu ewu. Yabụ, ụdị onyonyo ọ ga-akwado bụ jpg, png, bmp, gif.
Bookdị ebook ndị Kindle Fire nwere ike ịgụ
na Ụdị ọkụ nwere ike iwere dika klas nke abụọ nke ndị na-agụ akwụkwọ Kindu ọ bụ ezie na ọ dịghị onye na-akpọ ha dị ka ndị dị otú ahụ. Ọdịdị nke ngwaọrụ nke Kindle Fire ezinụlọ bụ nke mbadamba, ọ bụ ezie na ngwanrọ ya dị nnọọ, na-adabere na ụwa ịgụ, nke mere na ọbụna nha ihuenyo nke ngwaọrụ ndị dị, ahọrọla inye onye na-agụ ya nkasi obi ka ukwuu mgbe ị na-agụ ihe.
The Kindle Fire na-ebu n'obi ya ụdị nke gam akporo ahaziri onwe ya nke Amazon n'onwe ya, a na-akpọ sistemụ nrụọrụ a FireOS. Na mkpokọta, enwere ike ịsị na ịbụ mbadamba nkume ma nwee gam akporo, Kindle Fire nwere ike ịkwado ụdị ọ bụla, agbanyeghị Amazon sitere na ụdị izizi nwere ohere ịwụnye ngwa ọ bụla site na Storelọ Ahịa Play ka anyị wee nwee ike ịgụ usoro na-agwa anyị Amazon belụsọ na anyị tamper na Amazon software.
Na mbido, ka anyị na-azụrụ Kindle Fire anyị ma gbanye ya, anyị nwere ike ịgụ ụdị akwụkwọ ebook anyị kpọtụrụ aha n’elu, mana anyị nwekwara ike ịgụ usoro mgbasa ozi ndị ọzọ ọ bụ ezie na ha enweghị njikọ na ebook, ha ga-abụ nke enyemaka dị ukwuu iji mara mgbe ị na-eji akwụkwọ mmekọrịta.
N'ime ọnwa ndị na-adịbeghị anya, Amazon agbakwunyewo ọrụ Audible na gburugburu ebe obibi ya. Nke a emeela ngwaọrụ ndị nwere ihuenyo na-abụghị e-ink nwere ike ịkpọ ụdị ọdịyo, ọkachasị usoro nke ngwa a na-anụ maka ya, nke bụ aax.
Audidị a na-anụ ụda bụ otu n’ime ụdị ọhụụ ọhụrụ Amazon webatara na ngwaọrụ gị na lcd ihuenyo ma ọ bụ na agba agba. Ngwaọrụ ndị a dị ike karịa eReaders, nke pụtara na ha nwere ike ịkwado ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke usoro, ọ bụghị naanị ndị a maara maka ebook mana usoro ndị ọzọ na-enye anyị ohere ịnweta vidiyo, ọdịyo na nyocha weebụ zuru ezu.
N'etiti usoro vidiyo, mkv na mp4 kwụpụta, agbanyeghị na ha gụkwara 3gp na vp8 (webm). N'ime usoro ọdịyo, na mgbakwunye na usoro aax, ha nwekwara ike ịkpọ mp3 faịlụ, faịlụ OGG, usoro ọdịyo n'efu nwere ike ịdị ka mp3 na faịlụ ndị nwere kpochapụwo na mgbatị WAV.
Dị ka anyị kwurula na mbụ, anyị nwere ike ịgbanwe sọftụwia nke Kindle Fire, ma ọ bụ site na itinye ngwa na ngwa ma ọ bụ site na ịbị na mbadamba nkume ahụ. N'okwu nke abụọ, Amazon abụghị ọrụ maka nkwa ahụ, yabụ na-adịghị atụ aro ka ị mee ya iji nweta ebook na-agụ n'ụdị epub, mana na nke mbụ, enwere ike ịme ya ma ọ ga-enye anyị ohere ịgbakwunye usoro ebook ọhụrụ dị ka format Epub. Nke a ga-amata nke anyị Kindle Fire ma ọ bụrụ na anyị wụnye ngwa dịka Aldiko ma ọ bụ FbReader. Enwere ike ịchọta ngwa ndị a na ụlọ ahịa Google, n'ụlọ ahịa Amazon na ọbụlagodi na weebụsaịtị ha, yabụ inweta dị mfe ma nwụnye dị mfe ịme. Ozugbo achọtara ngwa ahụ, anyị na-echekwa ya na mbadamba nkume ma kaa nhọrọ ahụ iji "wụnye site na isi mmalite" nke ga-enyere anyị aka ịwụnye ngwa ọ bụla anyị chọrọ.
Ndị a bụ Olee ihe enyemaka nke Inddị usoro na Amazon eReaders na-akwado ma m na-ekwu n'ụzọ siri ike n'ihi na anyị enwetabeghị nkọwa nkọwa nke ga-eme ka onye na-agụ ihe na-agbagwoju anya nke na-achọ ịmata ma ebook ọ nwere ugbu a na Kindle nwere ike ịgụ ma ọ bụ.
Anyị nwere olile anya na iji ozi a niile, ị ga-amatarịrị kedu ụdị Kindle gụrụ ọ bụ ezie na ọ bụrụ na ị nwere ajụjụ, hapụ anyị ikwu.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Ndị niile na-agụ akwụkwọ » ụlọ ọrụ » Amazon unu si n'ihe unu » Dị nke Kindu, olee akwụkwọ ole ị nwere ike imeghe na agụ Amazon?
Enweghị ePub ??
hahaha, na-achikota edemede ị nweghị onye na-ama ya aka
Enwerem oku oku no mba. Na-agụ M kwenyesiri ike. Kpọrọ ihe, ọ bụ ụdị dị egwu. Enwere m ike iji ọtụtụ awa na-egwu NBA ma na-ekiri vidio na sọọfụ ntakịrị ma ọ na-agụ akwụkwọ ma nchapụta na-ewute m nke ukwuu. Amaghị m ihe kpatara m ga-agụ ma ọ bụrụ na ọ na-ewute m na ndị ọzọ abụghị nke ukwuu mana ọ dị otu ahụ. Maka ịgụ akwụkwọ, m na-ahọrọ ink kọmputa site na Paperwhite m.
Jorge Carlos kwuru dijo
Seriously anaghị agụ ePub?
Na m chọrọ ịzụta Kindle Paperwhite, n'ihi na m gụrụ na ọ na-eweta ohere 4GB ugbu a. yabụ ị nwere ike itinye akwụkwọ ntanetị. Otu onye m maara gwara m na ọ nwere ike mana ọ ga-amasị m ka mmadụ gwa m ma ọ ga-ekwe omume ịgụ ePubs na Paperwhite.
Zaghachi Jorge Carlos
Dị ka Victorio na-ekwu na mmemme Caliber, ị nwere ike ịga n'ụzọ zuru oke site na otu usoro gaa na nke ọzọ n'ihe na-erughị otu nkeji, yabụ ọ bụrụ na ị nwere mmasị na Kindle, ọ bụghị ihe mgbochi na ha anaghị agụ ePub. Enwere m Paperwhite na akwụkwọ niile m na-ebudata dị na ePub na enwebeghị m nsogbu inwe ike ịgụ na eReader n'ihi na m gbanwere ha tupu ebufee ha na AZW3
Caliber na-agbanwe ma dezie usoro ọ bụla dijitalụ, enwere m mbadamba nkume nke na-agụ epub na ọkụ na-agụ AZW3, na mmemme a m na-esi n'otu usoro gaa na nke ọzọ na-enweghị nsogbu.
Mazị Josep dijo
Ndewo, naanị m wedata ọkwa m ma enweghị m ike ịgbanwe usoro a na AZW3 n'ihi DRM
Biko, gịnị ka m ga-eme?
Zaghachi Ma. Josep
Iji JailBreak na ịwụnye CoolReader ị nwere ike ịgụ ụdị ọ bụla ịchọrọ
Zaghachi Pedro Jose
Daniela na Pedro Jose, daalụ nke ukwuu maka okwu gị, echere m na taa m nwetara Paperwhite, nke m na-arapara na ndị nke Game nke n'ocheeze wee gaa Dune saga, m na-agụ ha na ipad mana Erere m ya ịnakọta ma zụta laptọọpụ, yabụ ọ ga-eme ka ịdị na-agwụ m ịgụ site n'apata ụkwụ.
Pedro Jose, enwere m ike ịme JB na ụdị akwụkwọ ọhụụ kachasị ọhụrụ? ndụmọdụ ọ bụla maka ya?
Daalụ maka okwu gị
Enwere m akwụkwọ ọcha maka afọ 2 ma ọ nwere uru na ọghọm. Dị ka onye na-ege ntị, ọ dị mma maka ịgụ ihe. Ọ zuru oke nke ọma ma mmetụta izugbe dị mma. Nke ahụ kwuru, enwere ihe ndị na-anaghị aga nke ọma. Dịka ọmụmaatụ, ihe nchọgharị na-eme nchọpụta nke perennial bụ nke dị obere. Enweghị ike ịhọrọ onye ntụgharị okwu, ọ bụrụ na ịchọrọ Onye ntụgharị Bing nke ọma, ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-ediri ya. Ọzọkwa, ọ naghị agụnye asụsụ ọ bụla dị na Catalan, Basque, wdg.
Jorge Carlos, Chọọ site na Google, ọ dị mfe
Enwere m obi abụọ n'etiti akwụkwọ ọcha na ụdị Samsung Note 8.
Uru nke Cheta bụ na ọ nwere ikike karịa ma nwee ike ịme ihe ndị ọzọ. Ajụjụ bụ otú o si agụ ya ọgụgụ mode.
Enwere m ajụjụ… Enwere m akwụkwọ nke ebugoro na amazon, ọ nwere ihe oyiyi n'etiti paragraf (iji okwu) na eziokwu bụ na enweela m nnukwu nsogbu iji mee ka ha kwekọọ na n'ọnọdụ ha dịka ha kwesịrị. N'otu aka ahụ, mgbe m buliri ya na ịtụnanya, nke mere na m kpebiri iwepu onyonyo ahụ na akwụkwọ m, nke mere ka m nwee nnukwu nchegbu. Nwere ike inyere m aka idozi ya? Daalụ
Amalitere m site na Kindle na akwụkwọ ndị m tinyere adịghị egosipụta ebe ọ bụla. Isi na-aga m !!!!!!
Ndewo, enwere m ike ịnwe aka nke anọ na nke abụọ. Nyere nke a, m ga-achọ ịma ma ụdị Kindle azw4 dabara adaba na-arụ ọrụ azụ.
Ọ na - eme na ngwaọrụ nke anọ na - akwado usoro azw ma amaghị m ma usoro azw3 ọ ga - arụ ọrụ na ya. Daalụ
Ndewo, ebudatara m ụdị ihe ahụ maka pc na ụbọchị mbụ m gụrụ na ọ rụrụ ọrụ dị ebube mana mgbe ahụ ọ chọghị ịmalite, ọ nọ ebe ahụ na-ebido. Kedu nke na-eme? Ihe m nwere ike ime. m nwere windo 10 na m nwere 34 bit na 64 bit caliber. Ọzọkwa ka ịgụ epub.
Kobo Aura Edition 2, ihe ijuanya a na-atụghị anya ya na Kobo
Everlast Akwụkwọ ịde